रोचक - Ratopati
यी हुन् संसारकी सबैभन्दा सेक्सी गणित शिक्षिका (फोटोफिचर)
धेरै समस्या र अप्ठ्यारा हुने भएकाले हामीमध्ये धेरैलाई गणित विषय मन पर्दैन । विषय मात्र होइन, परीक्षामा निकै गाह्रो प्रश्नपत्र तयार गर्ने भएकाले हामीलाई गणित पढाउने शिक्षक पनि मनपर्दैन । यद्यपी, यी सबै कुरा मिन्स्क, बेलारुसका विद्यार्थीहरुका लागि ठिक विपरित छ किनभने उनीहरुसँग गणित शिक्षिकाको रुपमा ओकान्सा नेभेसेलाया छिन् । मिन्स्..
सडकमा नै दुध दुहेर बेच्छिन् यी महिला, लिने मानिसको भीड
दुध एउटा यस्तो चीज हो जो हरेक घरमा प्रयोग हुन्छ तर दुधमा मिसावट हुने भएकाले सबैज..
अनौठो नियम : ‘गुडमोर्निङ’ होइन महिला कर्मचारीले मालिकलाई चुम्बन गर्नुपर्ने (भिडियो)
चीनको एक कम्पनीमा आफ्ना महिला कर्मचारीलाई हरेक विहान चुम्बन गर्न लगाउने मालिकको ..
जागिर नपाएको झोंकमा एक पुरुषले गरे स्तन प्रत्यारोपण, थाहा पाउनुस् त्यसपछि के भयो…
पुरुषले भन्दा महिलाले जागिर पाउने सम्भावना उच्च रहेको ठान्ने एक ३० वर्षीया चीनिय..
खुसार्नीलाई त्यसको आकारको आधारमा अनुमान लगाउनुहुँदैन । यो कुरा लागुहुन्छ अजी चार..
फोटोग्राफी अवार्डमा भित्रिएका जनावरका निकै हाँस्यास्पद २० तस्बिरहरु
वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी अवार्ड सन् २०१६ गत अक्टोबर १ तारिखमा समाप्त भएको छ । यसमा कुन तस्बिरले पहिलो स्थान हाँसिल गर्यो भन्ने निर्णय नभएपनि हामी भने प्रतिस्पर्धामा भित्रिएका निकै रमाइला र हाँस्यास्पद जनावरका फोटोहरु हेरौंः
आखिर किन यी तीन गभर्नर ‘गर्भवती’ भएर भिडियो सुट गराइरहेछन् ?
जापानका तीन भिन्न प्रान्तका तीन पुरुष गभर्नरले कामकाजी महिला र गृहिणीहरुको समर्थन गर्दै ‘प्रेगनेन्सी भेस्ट’ लगाउँदै पुरुषहरुलाई घरको काममा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । सागा प्रान्तका गभर्नर योसिनोरी यामागुची, मियाजाकी प्रान्तका सन्जी कोनो र यामागुची प्रान्तका सुगुमासा मुराओका तीनैजनाले क्युसु यामागुची वर्क–लाइफ प्रोमोसन अभियानमा..
युवतीले करोडपती वृद्धसँग विवाह गरिन्ः ३ महिनापछि थाहा भयो, श्रीमान् आफ्नै हजुरबुवा
अमेरिकाकी एक २४ वर्षीया युवतीले ६८ वर्षे श्रीमान् आफ्नै हजुरबुवा भएको थाहा पाएपछि चकित परेकी छिन् । गत तीन महिनादेखि विवाह सम्बन्धमा रहेका ती जोडीले मायमीको गोल्डेन बीचस्थित फ्लोरिडामा रहेको उनको घरमा भएको पुरानो फोटो एल्बम हेर्दा आफूहरु हजुरबुवा नातिनी भएको थाहा पाएको बताएका छन् । उक्त एल्बममा उनका श्रीमानको पहिलो विवाहबाट जन्म..
असाध्यै ‘कालो र राम्रो’ वर्णले इन्टरनेटमा सनसनी मच्चाउने यी मोडल
अस्वभाविक कालो वर्ण भएका कारण इन्टरनेटमा सनसनी मच्चाउन सफल सेनेगली फेसन मोडल खाउदिया डिओप हुन् जसले सुन्दरताको परिभाषालाई पूर्ण रुपमा परिवर्तन गरिदिएकी छिन् । मोडल खाउदियाले इन्स्टाग्रामको ह्यान्डल मेलानिन डट गडेसमा रंग अभियानमा भाग लिएका तस्बिरहरु पोष्ट गरेपछि उनी एकाएक चर्चित बनेकी हुन् । उनको तस्बिरमा धेरैजसोले निकै राम्रा प्..
अचम्मः ‘ब्रेकअप’ पछि झर्यो सबै कपाल, नयाँ प्रेमी पाएपछि फेरी पलायो
लण्डन । तनावले थुप्रै प्रकारको रोगलाई जन्म दिन्छ । तनावमा परेपछि कसैलाई निन्द्रा लाग्दैन त कसैलाई भोक । तर एक महिलाको दाबी अुनसार सम्बन्धमा भएको तनावका कारण उनको शिरको सबै कपाल झरेको छ । र केही महिना पहिले नयाँ प्रेमी पाएपछि पुनः उनको टाउकोमा कपाल पलाउन सुरु गरेको छ । सुपरमार्केटकी असिस्टेन्ट एशलीग अलौतेबीका अनुसार […]
राजधानीकै सडकमा जब पोर्न फिल्म देखाइयो…
जकार्ता– इन्डोनेशियाको राजधानी जकार्ताका सडकमा यात्रा गरिरहेका मानिसहरु त्यतिबेला अचम्ममा परे, जव त्यहाँ लागेको एक विद्युतीय डिस्प्लेमा अचानक पोनी फिल्म चल्न शुरु भयो । त्यहाँको विद्युतीय बोर्ड शहरका मेयरको कार्यलयबाट निकै नजिक छ । यो पोर्न फिल्म पाँच मिनटसम्म चल्यो । अचानक विद्युत काटिएपछि 24-square-meter LED बन्द भयो ।यो शुक्र..
चीनको शाकाहारी पर्वको यस्तो परीक्षामा उत्रिए भक्तजन (डरलाग्दो फोटोफिचर)
दक्षिण पूर्वी एसियाका थुप्रै चिनियाँ समूदाय यो हप्ता शाकाहारी बनेका छन् । तोइस्त नाइन इन्पेरर गड्स फेस्टिबल नामक चाड मनाउनका लागि मानिसहरु शाकाहारी भएका हुन् । तीमध्ये कतिले हद पार गरेका हुन्छन् । एक हप्तासम्म मानिसहरुले आफ्लाई नै काटेर आफ्नो धार्मिक प्रेम देखाउन तँछाडमछाड गर्दछन् । यसमा तातो काइलामा हिँड्नेदेखि आफ्नो शरिरलाई छे..
भगवानको आदेश पाएको भन्दै १८ वर्षदेखि खाल्डो खन्दै यी व्यक्ति (भिडियोसहित)
वेस्टर्न एल सालभाडोरका ६९ वर्षीय सान्टियागो सान्चेजले विगत १८ वर्षदेखि खाल्डो खनेरै आफ्ना दिनहरु व्यतित गरिरहेका छन् । १८ वर्ष पहिले सान्टियागोलाई भगवानले यसो गर्न आदेश दिएपछि उनले एक दिनपनि खाली नबसी खाल्डो खनिरहेका छन्, निरन्तर । स्रोतका अनुसार समाचार संकलनका लागि एक पत्रकार यो टनेलभित्र छिर्दा उनी यसको अन्त्यमा पुग्नुभन्दा पह..
झुटा होइनन् वास्तविक हुन् यी रमाइला १० तस्बिरहरु
धेरै पटक आँखाले देखेको कुरामा विश्वास गर्न मुश्किल हुन्छ । सोसल मिडियामा थुप्रै झुटा वा फोटोसप गरिएका फोटोहरु पनि सेयर हुन्छन् तर कुनै फोटो वास्तविक भएपनि झुटोजस्ता देखिन्छन् । आज हामी तपाईंलाई यस्तै फोटोबारे जानकारी दिँदैछौं । रसियाली फोटोग्राफर वादिम त्रुनोवले आफ्नो नयाँ कलेक्सनमा लोखर्केका तस्बिरहरु क्लिक गरेका छन् । दुई लोखर..
ट्वाइलेट बोकेर हिँड्नेदेखि बान्ता सोहोर्नेसम्मः संसारका निकै अचम्मका जागिर
सायद तपाईंमध्ये धेरैले आफ्नो काम मनपराउनुहुन्न होला तर यहाँ दिइएका यी काम बारे पढिसकेपछि धेरैले आफ्नो काम मनपराउन थाल्नुहुनेछ । पैसाका लागि संसारभरीका मानिसहरुले निकै अचम्मको काम गर्ने गरेका छन् । कसैले ट्वाइलेटको सिट कम्मरमा बाँधेर हिँड्छन् भने कोही फन पार्कमा बान्ता सोहोर्छन् । आज हामी तपाईंलाई यस्तै अचम्मका काम बारे जानकारी द..
जब आँखै नभएको बालक जन्मियो…
एक महिलाले दुबै आँखा नभएको बालकलाई जन दिएकी छिन् । लिउ पेइहुवाले गत सेप्टेम्बर २० तारिखमा यस्तो बालकलाई जन्म दिएकी छिन् जसको शरिरमा आँखाका तन्तु नै छैन । डाक्टरका अनुसार ती बालकलाई एनोप्थाल्मिया नामक रोग लागेको छ जुन १ लाख बच्चाहमध्ये एउटामा देखिन्छ । गोआंगझोउ, चीनमा बस्ने ती बालककी आमाले अब छोराको उपचारका लागि विशेषज्ञहरुको [&h..
यो तस्बिर आजभन्दा करिब ११६ वर्ष पहिले खिचिएको थियो । यसमा बेलफास्ट, आयरल्याण्डस्थित एउटा लेनन कपडा उद्योगमा काम गर्ने महिलाहरु देख्न सकिन्छ । उनीहरुले आफ्नो काम गर्ने औजार पनि कम्मरमा बाँधिरहेको देख्न सकिन्छ । तर यदि तपाईंले यो तस्बिरलाई ध्यानपूर्वक हेर्नुहुन्छ तब तपाईंलाई अचम्म लाग्न सक्छ । यदि ध्यानपूर्वक हेर्नुहुन्छ भने दोस्र..
संसारमा पहिलो पटक तीन मानिस मिलेर एक बच्चा जन्माए
अमेरिकी वैज्ञानिकले संसारको पहिलो पटक तीन मानिस मिलेर एक सन्तानलाई जन्म दिन सफल भएका छन् । यो नयाँ प्रविधिमा बच्चाको भ्रुणमा तीन माता–पिताको डिएनए समावेश गरिएको छ । न्यू साइन्टिस्ट डट कमका अनुसार जोर्डनका एक दम्पत्तीले पाँच महिना पहिले मेक्सिकोमा आफ्नो यस अनौठो बच्चालाई जन्म दिएका छन् । उक्त कार्यमा संलग्न नभएका किंग्स कलेज लण्ड..
यदि कसैका कारण तपाईंको जीवन बचेको छ भने ती व्यक्तिको उपकार तपाईंले जिन्दगीभर पनि बिर्सनुहुन्न । यस्तो सोच मानिसहरुमा मात्र नभई जनावरमा पनि पाइएको छ । यदि विश्वास लाग्दैन भने यो पेन्ग्विनलाई हेर्नुहोस् जो हरेक वर्ष ८ हजार किलोमिटर यात्रा गरेर ती व्यक्तिलाई भेट्न आउँछ जसले सन् २०११ मा उसको ज्यान बचाएका थिए । ५ […]
यसरी राखिन्छ विश्वकपमा खेलिने बलको नाम
काठमाडौं – विश्वकप फुटलमा प्रयोग हुने बल निर्माणका लागि फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले लाखौं खर्चिने गर्छ । लामो अनुसन्धान र परीक्षणपछि उत्पादित बललाई मैदानमा पुनः परीक्षण गरिन्छ । अनि मात्रै बललाई विश्वकप मैदानमा पुर्याइन्छ । फिफा र विश्वका आयोजक राष्ट्रले मिलेर विश्वकपमा खेलिने बलको नाम राख्ने गर्छन् । सन् १९७० मा मेक्सिकोमा भए..
चीनका यी निकै सुन्दर शिक्षिकाहरु जोसँग हरेक विद्यार्थी पढ्न चाहन्छन् (फोटोफिचर)
दक्षिण पश्चिम चीनको छेङ्दुस्थित सिचुवान नर्मल युनिभर्सिटीका विद्यार्थीहरु आजकाल निकै मेहनतका साथ पढ्नुका साथै अतिरिक्त कक्षामा पनि समावेश भइरहेका छन् । उनीहरुले परीक्षामा राम्रो गर्न यसो गरेका भने होइनन् । आफ्ना निकै राम्री शिक्षिकाहरु हेर्नका लागि उनीहरुले यसो गरिरहेका छन् । निकै राम्री चिनियाँ शिक्षिकाहरुको १६ आकर्षक तस्बिरहरु..
पत्नीबाट छुटकारा पाउन जेलको बास
अमेरिकामा एक व्यक्ति पत्नीबाट छुटकारा पाउनकै लागि जेल पुगेका छन् । ७० वर्षीय लरेन्स जोन रिप्पलले अमेरिकाको कान्सास सिटी बैंकमा आफूलाई पक्राउ पार्नकै लागी चोरीको प्रयास गरेको कान्सास सिटी स्टारले जनाएको छ । केही समयअघि कानसासनको ७५६ मिनिसोटा एभेन्युमा रहेको बैंक अफ लेबरमा जोन पुगेका थिए । त्यहाँ पुगेर उनले त्यहाँको बैंकको कर्मचार..
डाक्टरको गल्ती ४३ वर्ष सम्म ह्विलचेयरमा रहेका व्यक्ति फेरि हिँड्न थाले
पोर्चुगल – डाक्टरहरुले गलत रोग भनेर खुट्याउँदा विगत ४३ वर्षदेखि ह्विलचेयरमा बस्न बाध्य पोर्चुगलका एक व्यक्ति फेरि हिँड्न थालेका छन् । मिडियामा आएको एक रिपोर्टका अनुसार रुफिनो बोरेगोलाई १३ वर्षको उमेरमा लिसबनस्थित अस्पतालले मस्कुलर डाइस्ट्रोफी नामक उपचार नहुने रोग लागेको बताएका थिए । त्यसपछि उनी ४ दशकसम्म ह्विलचेयरको साहरामा बाँच..
के अहिलेसम्मकै ठूलो सर्प भेटिएको हो ?
पारा – ब्राजिलको एक निर्माण स्थलमा ३३ फिट लामो सर्प फेला परेको छ । त्यहाँको अल्टामिरामा रहेको एक गुफालाई विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेर फुटाएपछि उक्त सर्प फेला परेको हो । उक्त सर्पको वजन ४ सय किलो रहेको छ भने त्यसको चौंडाइँ एक मिटर रहेको बताइएको छ । उक्त एनाकोण्डालाई चेनले बाँधेर झुण्डाइएको देखाइएको छ । […]
माउसुलीदेखि माछासम्मको नाम राखियो ‘ओबामा’
अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामाको सम्मानमा संसारभर केही नाम राखिएका छन् । भर्खरैमात्र वैज्ञानिकले एक फ्लैटवर्म (एक प्रकारको चिपटी किरा) को नाम ओबामाको नाम राखेका छन् । यसको नाम राखिएका छ, बराकट्रे ओबामाई । फ्लैटवर्म यस्तो प्रजाति हो, घागोजस्तो लामो हुन्छ । मुलत यो मलेशियाली फ्रेशवाटरमा पाउने कछुवामा भेटिन्छ । यो कछुवाका फोक्सोमा प..